sainzi uye tekinoroji | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Chikamu: sayenzi uye teknolojia
Nhare mbozha yekuredza nekuvhima neye GPS-navigator. Mhando dzakanakisa uye ongororo pamusoro pavo
Chengetedza zvigadzirwa zvefoni zvagara zvichingofarirwa. Varidzi vazhinji vanoda kuve nechokwadi chekuti "chishongo" chavo hachizopaza kana chakadonhedzwa pane yakaoma nzvimbo kana kunyura mumvura. Kunyanya ...
Washing Machine LG E10B8ND: ongororo, mirairo, zvakatemwa, mifananidzo
Kana uchitenga muchina wekuwachisa, zvinodikanwa kuti ufunge nezve nzira dzichasarudzwa nemidziyo. Iwe unofanirwa kutarisisa nekushandiswa kwemagetsi, mvura, tarisa dhizaini raunoda, uye zvakare funga nezvekuita. Tinotenga muchina wokuwachisa ...
Biometric kuchengetedza masystem: tsananguro, maitiro, anoshanda application
Sayenzi yemazuva ano haina kumira mushe. Kazhinji uye kazhinji, kudzivirirwa kwemhando yepamusoro kunodiwa pamidziyo kuitira kuti mumwe munhu akazvitora netsaona arege kutora mukana izere neruzivo. Zvimwe kunze kweizvozvo, ...
Keneksi Crystal smartphone: wongororo, zvakatemwa, tsananguro uye kuongorora kwemwene
Munguva pfupi yapfuura, vanofarira smartphone vakakamura mumisasa miviri: vamwe vanopokana kuti kuratidzwa kwakakura mukana wakakura uye zvinhu zvakawandisa, nepo vamwe vasingazive magajeti anopfuura mashanu masendimita mukutarisa ...
W6500 Philips smartphone: ongororo yemhando, kuongorora kwevatengi uye nyanzvi
Pakupera kwegore rapfuura, Philips akaunza yayo itsva W6500 smartphone kunyika. Filips - kambani inoita basa rekugadzira dzimba, yedhijitari nezvimwe zvinoshandiswa - yakakwanisa kugadzira gadget yakagadzirwa zvine mutsindo ...
Mutambo console Sony Playstation 3 - chiroto chomutambi!
Consoles yagara yakave yakakurumbira. Zvinonzwisisika, nekuti mutambo wemitambo une zvakawanda zvakanakira pamusoro pemakomputa ako (ma PC). Munyaya ino tichataura nezve koni kubva kune inozivikanwa Sony kambani. Chirevo ...
Tsanangudzo Jinga Hotz M1 smartphone: muridzi wongororo, yakatarwa uye mamiriro
Dzimwe nzira dziri kugara dzichiitika pamusika wekufambisa, uine chinangwa chekudzikisa mutengo wepasi rese uye kuwedzera huwandu hwemidziyo inowanikwa. Uchapupu hwakajeka hweizvi hunogona kunzi smartphone Jinga Hotz M1. Ongororo dzichimurondedzera, ...
Rugged foni pa2 SIM makadhi ane bhatiri rine simba (ongororo)
Kune vazhinji vedu, runhare mbozha mubatsiri akavimbika mune chero mamiriro ehupenyu. Isu tinozvitora munzira, kushanda, kuenda kuruwa, uye kunyange parwendo kunze kweguta. Saka ...
Nzira yekuchaja sei iPhone pasina kubhadharisa? Isu tinachaja iPhone isina charger
Nhasi hazvigone kufungidzira munhu wemazuva ano asina nhare mbozha. Nekudaro, hazvibviri kufungidzira gadget yemagetsi isina kuperekedza iyo yakazara kushanda kweiyo michina yekuwedzera, kuvapo kwayo kunofanirwa. Semuenzaniso, yakaburitswa ...
Dial chiratidzo: tsananguro, chimiro chechishandiso
Iyo dial gauge chishandiso chakagadzirirwa zviyero zvine hukama hwekutsauka kwechimiro, zviyero zvekunze, uye nzvimbo dzepasi. Iyo inomiririra hurongwa hwekubatanidza magiya uye levers inowedzera kufamba kwetsvimbo uye kushandura idzi ...
Smartphone "Land Rover A8": zvinyorwa, zvakatemwa, kuongororwa
Saka, nhasi smartphone inonzi "Land Rover A8" ichaunzwa kune yako hanya. Chii ichi Izvi zvigadzirwa zvakaonekwa muRussia kwete kare kare, asi vazhinji vanozvifarira. Chii chaizvo? Pa ...
"Nokia Lumiya 925": yakatarwa, mafoto, ongororo
Nhare dzeNokia dzinozivikanwa uye dzinoremekedzwa muRussia. Izvi zvinokonzeresa kutaridzika kwavo zvinoyevedza dhizaini, yakakwirira kuvaka mhando. Izi zvishandiso zvinoratidzirwawo nehunhu hunoshanda, kumhanya, kusimba mukushanda. Kusvika pamwero ...
DIY headphone amplifier mu15 maminetsi
Mushure mekuedzwa kwekutanga kwakabudirira, yega yega Amateur mudiwa, kana anzwa kutapira kwekukunda kwake, anoda kuedza kuita chinhu chaicho. Kwete chidiki, asi chinonyatsoshanda chinozadza-chinhu. Homemade yakapusa amplifier yakanakira izvi ...
Firiji "Ariston": ongororo. Firiji "Ariston" - mirairo, malfunctions
Nhasi, firiji chikamu chakakosha chekicheni chero. Iko inokubvumira kuti ugare uine zvigadzirwa zvese zviripo zvakanyatsotsva, zvichikupa chikafu chitsva uye chemhando. Ehe saizvozvo, chete kana ...
"Highscreen Boost 2 SE." Yakakwirira Boost 2 SE. Highscreen smartphone - kutaurwa
Chekutanga kuedza kuita foni yakadaro kuburitswa kweiyo Highscreen Boost 2 smartphone, iyo yakasiya vashandisi vaine manzwiro akasanganiswa. Izvo zvingadai zvakamupa iyo yakasimba kwazvo 6000 mAh bhatiri, asi processor ...
Doogee F5: ongororo, yakatarwa, ongororo
Doogee chinzvimbo chinozadzikiswa neiyo itsva mureza F5. Iyo inogadzira yakarongedza brainchild kwete chete neyakagadzirwa, asiwo nekushamisika kwezvinhu zvitsva. Chii chingashamise mushandisi neoni yacho? Kugadzirwa kweKugadzira kunozivikanwa chaizvo, asi panguva imwechete ...
Cordless Mafoni eKhaya: Maitiro Ekusarudza Zvakanakisa
Radiotelefoni dzakagadzirirwa kuendesa izwi pamusoro peshanyo yakakosha. Mukana wavo kusavapo kwe chero waya. Basa rese rezvishandiso izvi rakavakirwa pane chiratidzo chinouya kubva kuzviteshi. Parinhasi, kutaurirana ...
Quadcopter SYMA X5SW: tsananguro, zvakatemwa, kuongororwa
Iyo Syma Toys kambani, iyo inogadzira yakanakisa drones, haina kukundikana kunyangwe panguva ino, yakanga yagadzira yakanakisa yepamusoro-yepamusoro modhi ine maviri-megapixel kamera uye yekutanga-munhu maonero. Zvakanaka here kutenga ...
Smartphone - chii icho?
Kunyangwe kune vakawanda, iyo nguva ye "smart" mafoni ekukurukurirana mbozhanhare yauya kwenguva yakareba, vamwe vachiri kushamisika: "Smartphone - chii ichi?" Chokwadi, munhu anouya kuchitoro kuzotenga mbozhanhare haa ...
Samsung LCD TV T32E310EX: ongororo
Mhinduro yepasirese inosanganisa cheki uye TV panguva imwe chete uye yakarongedzwa neyemhando yepamusoro yemhando yematafura ndeye Samsung T32E310EX. Ongororo nezveTV iyi, hunyanzvi hwayo hunyanzvi uye zvakatemwa zvichakurukurwa mberi ...
peji 1 peji 2 ... peji 213 Next Page
Mibvunzo ye53 mu database yakagadzirwa mu 0,661 masekondi.